အစည်းဝေးတစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » အစည်းဝေးတစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
Posted by Mg Ogga on Dec 18, 2011 in How To.. |0comments
အခုချိန် ပရဟိတလူငယ် အဖွဲ့လေးတွေများစွာ ပေါ်ပေါက်လာတာ အားရစရာ။ ဒါပေမယ့် ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ အတော်အများ အကြောင်းကြောင့် စနစ်တကျ မလုပ်နိုင်တာတွေရတယ်။ အဖွဲ့တိုင်း အဖွဲ့တိုင်း အစည်းဝေးတွေ လုပ်ပြီး ဘာမှလည်း မထူး အလုပ်ရှုပ်တယ် ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့ လှော် ဒီကွေ့ ဒီတက် နဲ့ လှော်ဆိုတာမျိုးတွေ ကြားနေရတော့ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့စည်းတွေမှာ အစည်းဝေးဘယ်လို လုပ်သင်တယ် ဆိုတာ ကို သိထားသလောက်လေး မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ သိပြီးသား တတ်ပြီးသား မဟာ့ မဟာ ဆရာ့ ဆရာ ကြီးများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့များအတွက်သာ…………………….
ကျနော်တို့ လူမူ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အစည်းအဝေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လပတ်အစည်းဝေး၊ နှစ်လယ် အစည်းဝေး၊ နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေးဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ အားဖြင့်လုပ်တဲ့အစည်းဝေးတွေ။ လုပ်အားပေး အစည်းဝေး၊ ဖြစ်မြောက်ရေးအစည်းဝေး၊ စတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အလုပ်ခုကို အခြေခံပြီး စည်းဝေး တဲ့ အစည်းဝေး တွေဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အစည်းဝေးတွေဟာ ရပ်ရွာကို အခြေခံတာရှိမယ်၊ အဖွဲကို အခြေခံတာ ရှိမယ်၊ အဖွဲ့ အများကြီး နဲ့ တွေ တာ မျိုး ရှိမယ်၊ လုပ်ငန်းမတူ ပေမဲ့ ပန်းတိုင်တူတဲ့ အစည်း အဝေးတွေ ရှိမယ်။
ဘယ်လိုပဲ လုပ်တဲ့ အစည်းဝေးဖြစ်ဖြစ် ရလဒ်တစ်ခု၊အဖြေတစ်ခု၊ ဆုံးဖြတ်တစ်ခု ရဖို့ လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အစည်းဝေးလုပ်ပြီး ရလဒ်တစ်ခု ရဖို့ အဖြေတစ်ခုထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တစ်ခု ချ မှတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အဖွဲ့ကိုလိုက် ပြီး အစည်းဝေးသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးရှိနေတာကြောင့် အားလုံးခြုံမိအောင် အစည်းဝေး မလုပ်ခင်၊အစည်းဝေးလုပ်နေစဉ်၊ အစည်းဝေးလုပ်ပြီး အချိန်တွေမှာဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုပဲ ဝေမျှပါရစေ။
အစည်းဝေးလုပ်တော့မယ်ဆို မလုပ်ခင်ထဲက အချိန်ယူပြင်ဆင်တာ အကောင်းဆုံးပါ ပဲ။ မဟုတ်ရင် ပြင်ဆင်မူမရှိတာ ကြောင့် အစည်းဝေးလုပ်နေစဉ်မှာ ကမှောက်ကမတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အစည်းဝေးဒီဇိုင်း(အာဂျင်တာ) – အစည်းဝေးမလုပ်ခင် ကထဲက အစည်းဝေး ပုံစံ ကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့် ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အစည်းဝေးလုပ်တယ်၊ အစည်းဝေးမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ်၊ ဆိုတာကို ကြိုတင် ပြောကြားထားသင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမယ် ခေါင်းစဉ်အလိုက် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
ဖိတ်စာ (သို့) ကြိုတင်အကြောင်းကြား – အစည်းဝေးလုပ်တော့မယ်ဆို မလုပ်ခင် တစ်ပတ် ဒါမှမဟုတ် ၃ ရက်လောက် ကြိုတင်ပြီး အစည်းဝေးတတ်ရောက်မဲ့ သူတွေကို ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားထား သင့်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ အစည်းဝေးတတ်ရမယ်၊ အစည်းဝေးမှာ ဘာတွေဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာ ကို ကြိုတင် အသိပေးထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်မှာ အစည်းဝေးလုပ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်လုပ်မယ်၊ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတာ ကို အစည်းဝေးကိုတတ်ရောက်မယ်သူတွေ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
အစားအသောက် – အချို့ အစည်းဝေးက တစ်နေ့လုံးနည်းပါး ကြာတတ်တာမို့ အစည်းဝေး တတ်ရောက် သူတွေ စားသောက်ဖို့ အတွက် အစားအသောက်တွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ နေ၀က် လောက် ကြာမယ် အစည်းဝေးဆို ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တို့လောက် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ မလိုအပ်ရင်လည်း ပြင်ဆင် စရာမလိုပါ။
အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်း – အစည်းဝေးမှာ သုံးဖို့ စက္ကူချပ်တွေ ဆော့ပင်တွေ လိုအပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ လုပ်မယ့် အစည်းဝေးကိုလိုက်ပြီး ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်/နေရာအပြင်အဆင် – အစည်းဝေးလုပ်မယ် ပတ်ဝန်ကျင်ဟာ ဆူညံနေတာမျိုး ပြင်ပသူစိမ်းတွေ ၀င်ထွက်သွားလာနေတဲ့ နေရာမျိုးကို မရွှေးချယ်သင့်ပါဘူး။ ဆိတ်ငြိမ်ပြီး အာရုံစုစည်းလို့ ကောင်းမဲ့ နေရာမျိုးကို အဓိကထား ရွှေးချယ်သင့်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းအပြင်အဆင်ကလည်း အစည်းဝေးတတ်ရောက်သူတွေအတွက် သက်တောင့် သက်တာ အနေအထားမျိုးရှိသင့်ပါတယ်။ ကိန်းကြီးခန်းကြီး ဖြစ်ဖို့လည်း မလိုသလို ဖြစ်သလို ထိုင်ကြတာလည်း မကောင်းပါဘူး။
မှတ်တမ်းတင်သူရွှေးချယ် – အစည်းဝေးက ပြောဆိုချက်တွေ ဆွေးနွေးချက်တွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို မှတ်တမ်းတင်မယ် သူကို သေသေချာချာရွှေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်မယ့် သူကလည်း သေသေချာချာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်မဲ့သူ အစည်းဝေးရဲ့ဆိုလိုရင်းကို ရေးမှတ်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရေးတို တတ်ထားတဲ့ သူဆို အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အစီစဉ်ကြေညာ – အစည်းဝေးစတင် လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ အစည်းဝေးမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ် ဘယ်သူက တော့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ်၊ ဘယ်သူကတော့ မှတ်တမ်းတင်မယ် အချိန်ဘယ်လောက်ယူမယ် ဆိုတာ ကို စတင် ကထဲက ကြိုတင် ကြေညာထားသင့်ပါတယ်။
စည်းကမ်းသတ်မှတ်- အစည်းဝေးတွေမှာ စကားလုပြောတာမျိုး တစ်ယောက်တည်းကပဲ ပြောတာမျိုး၊ တောင်စဉ်ရေမရ လျောက်ပြောနေတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ် ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် အစတတည်းက ဘယ်လို ပြုမူရမယ် ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေ ထုတ်ထားသင့်ပါတယ်
နားထောင်ပါ – လူငယ်ပရဟိတ အစည်းဝေး အတော်အများ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာဟာ နားမထောင်ကြတာပဲ။ ဒီကိစ္စက သိပြီးသား တောင်ငေး မြောက်ငေး ကိုယ်ဘေးက လူနဲ့ စကားပြော ပြောနေတဲ့ သူကို ဂရုမစိုက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစည်းဝေးတတ်ရောက်သူတိုင်း နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့ သူကလည်း နားထောင်ချင်အောင် ပြောဖို့လိုပါတယ်။
လမ်းကြောင်းမပြောင်းအောင် ထိန်းကြောင်း – အစည်းဝေးဟာ အာလာပ သလာပ ပြောဖို့မဟုတ် ရလဒ် တစ်ခု ထွက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အဖြေရှာကြတာမို့ အစည်းဝေးရဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်း မပျောက်ဖို့ မသွေဖယ်ဖို့ ထိန်းကြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ လမ်းကြောင်းသွားတာတာနဲ့ တပြိုင်နက် ရည်ရွယ်ရာ လမ်းကြောင်း ပေါ်ရောက်အောင် အမြဲ တစေ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အားလုံးပါဝင်ဖို့- အစည်းဝေတွေမှာ သိထားတတ်ထား နားလည်ထားတဲ့ သူကချည်း ပြောပြီး ကျန်သူများက မပြောနိုင် မဆိုနိုင် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစည်းဝေးတတ်ရောက်သူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်စီ အမြင်တွေ ကလည်း အစည်းဝေးရလဒ်တစ်ခု အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ သူချည်းပြောသွားပြီး ငါတို့ က လိုက်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားသံတွေလည်းထွက်လာနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် အစည်းဝေး တတ်ရောက် သူတိုင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဂိမ်း၊သီချင်း – တစ်နေ့လုံး လုပ်ရမယ် အစည်းဝေးတွေဟာ စကားပြောလိုက် ငြင်းခုန်လိုက် နဲ့မို့ ပျင်းစရာ အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးတာ ပျင်းရာပြီးဆို သီချင်းဖြစ်ဖြစ် ဂိမ်း ဖြစ်ဖြစ် ဆိုသင့် ကစားသင့်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုရာ မှာလည်း အဖွဲ့သီချင်း၊ ရောက်အဖွဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သီချင်းဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ ဂိမ်ဆိုရင်လည်း အပျော်သက်သက် မဟုတ်ပဲ အစည်းဝေးကို အထောက်ကူ ပြုစေတဲ့ သင်ခန်းစာရစေတဲ့ ဂိမ်းမျိုးဆိုပိုကောင်းပါတယ်။
မေးခွန်းမေး- အစည်းဝေးမှာ ဆွေးနွေးချက်တွေ ကို နားမည်ရင် မှရှင်းရင် ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူကလည်း ရှင်းသလားဆိုတာ ကို ပြန်ပြန်ပြီး မေးနေသင့်ပါတယ်။ ဆွေးနွေး သူများရဲ့ ပြောစကား ဆိုလိုရင် ကို အနက်ပြန်ကောက်ပြီး ဒီလို ဆိုလိုတာလားဆိုတာ အမြဲတစေမေးနေသင့်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် Tools များသုံး – အစည်းဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ် ဆို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အီယောင်ဝါး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီမှမဟုတ်ရင် လည်း အခြားသူများက ဝေခွဲမရ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေစဉ် တစ်ဦး တစ်ယောက်ကပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချသွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရအောင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ နည်းလမ်းတွေ ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်.။ မဲပေးနည်း၊ အရေးကြီး-မကြီး ချိန်ထိုးနည်း၊ စသဖြင့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုရတာဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပဲမဟုတ်ပဲ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အတည်ပြု- ဒီလို နည်းလမ်းသုံးပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကို သေချာ အတည်ပြုနိုင်ပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း သေသေချာချာ သဘောပေါက်ဖို့ နဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း အလုပ်လုပ်ဖို့ ကို ဘယ်သူတာဝန်ယူမယ်၊ ဘယ်အချိန်ပြီးမယ်၊ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်မယ်၊ ဘာတွေလိုတယ် ဆိုတာ ကို သေသေချာချာ ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက် အားလုံး သဘောတူလားသေသေချာချာ မေးသင့်ပါတယ်။ ထောက်ခံပါ ထောက်ခံပါတယ် ပေါ့ဗျာ 
အနှစ်ချုပ်- ဒါဆိုရင် အစည်းဝေးပြီးပြီးလို့ပြောလိုရပါပြီ အစည်းဝေ စတင်ချိန်ကနေ ပြီးတဲ့အထိ ပြောခဲ့တာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ ကို တက်ရောက်သူတွေကို အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောသင့် ပါတယ်။ ဒါမှ ကွဲလွဲ နေတာ ရှိရင် ချက်ချင်းပြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်တမ်း တတ်ရောက်သူစာရင်း – လူငယ်အဖွဲ့အတော်အများ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ အားနည်းတာ တွေရပါတယ် အစည်းဝေးတစ်လျောက် ဆွေးနွေခဲ့တာတွေ ကို မှတ်တမ်းတင်သူက တင်ပြီး တက်ရောက်သူ စာရင်း ကိုပါ ပြုစုထားသင့်ပါတယ်။ အဖွဲ့တိုးတတ်မူ အဖွဲ့အခြေအနေကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ မှတ်တမ်းလိုပြောတဲ့နေရာမှာ အစည်းကဆွေးနွေးချက်တွေ အစည်းဝေးပြုလုပ်နေ တဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံတွေ ပါလိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အစည်းဝေးပြီးပါပြီ။
မတတ်ရောက်နိုင်သူတွေကို မှတ်တမ်းပေးပို့- အစည်းဝေးတစ်ခပြီးသွားပေမဲ့ အစည်းဝေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ကတော့ မပြီးပြတ်သေးပါဘူး အစည်းဝေးမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ အချက်ချက်တွေ ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အစည်းဝေး ပျက်ကွက်သူများဆီ အဖွဲ့ဝင်များဆီ ကို ပေးပို့ရပါမယ်။ ထိုမှသာ အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ပျက်ကွက်သူတွေလည်း အစည်းဝေတက်ရောက်သကဲ့သို့ သိရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Follow up – အစည်းဝေ အတော်အများ အချိန်ကုန်လူပန်းပြီး ဘာမှ မထိရောက် ဘာမှမထူး ဆိုတာတွေ က follow up မလုပ်တာတွေကြောင့် ပါပါတယ်။ အစည်းဝေးကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အတိုင်း တကယ် လုပ် မလုပ်ဆိုတာ ကို စောင့်ကြည့် သတိပေးနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အချိန်ကုန် လူပန်းပြီး အစည်းဝေးက အဓိပ္ပာယ် မရှိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း လုပ်မလုပ် ကို သတိပေး စောင့် ကြည်နေဖို့ လိုပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ ရာ
ဒီ Diamond Shape Decision Making Model ဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ပါမယ် ထင်ပါတယ် ဒီ Model လေး ကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရင် လွယ်တဲ့ ဟာမို့ သက်သက်ပြောပြရတာ ပါ။ အခြား Model တွေလည်း အများကြီးရှိပေမယ့် ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ဒီတစ်ခု ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ နဲ့ ပဲ ပြောသွားပါမယ်။
Topic က ရံပုံငွေ ရှာဖွေရေးဆိုပါဆို။ ရံပုံငွေ ရှာဖို့ အတွက် ဘယ်လို လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ ကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး Brain Storming အရင် လုပ်ပါတယ်။နောက် Brain Storming လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ အချက်တွေ ဥပမာ – လက်မူပစ္စည်းလုပ်ရောင်း၊ ကယ်ရီကေးချားကာတွန်းဆွဲ ၊ မုန့်လုပ်ရောင်း၊ အလှူခံ၊ စတဲ့ စတဲ့ Criteria တွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီ Criteria တွေကို ရွှေးချယ်ပြီး အများသဘောတူတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလည်းဟာ ရိုးရှင်းပြီး သုံးစွဲလို့ ကောင်းတာမို့ အခြားနည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပေးမယ့် ဒီနည်းလေးကိုပဲ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အစည်းဝေးတစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာ ကိုအကြမ်းဖျည်းသိ လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကျနော် ပြောသလို လုပ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး အစည်းဝေးလုပ်ရင် စဉ်းစားထားရမယ် အချက်တွေ ကို ဝေမျှတဲ့ သဘောပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်အဖွဲ့နဲ့ ကိုက်တာကို ယူမကိုက်ကို မယူဖို့ ပါ။ အစည်းဝေးဖြစ်ခု ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးလေး ရရင်ပဲ ကျနော် ရေးရကျိုး နပ်ပါတယ်။ မရရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ
P.S: BYEP က ပြုလုပ်တဲ့ Facilitation Skill Training မှ သင်ကြားခဲ့တဲ့ ဟာကို ပြန်လည် ဖောက်သည် ချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒီသင်တန်းကိုပြုလုပ်ပေးသည် ကျနော့်မိခင်အဖွဲ့စည်း BYEP နှင့် သင်တန်း တာဝန်ခံဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်း ပပဖြိုးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ခေတ္တ- ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေ မိဂဒါဝုန်အင်စတီကျု
၁၃၇၃ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်
၀၂း၁၇ တွင် ရေးသားပြီးစီး